Radiologic နည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Radiologic နည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 1,398 views
x က CAT နှင့်ရောင်ခြည် Scan ဖတ်ယူပါသို့မဟုတ်အဖြေရှာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက် patientis သည်အသွေးစီးသို့ nonradioactive ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဆပ်. စကင်ဖတ်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်မဟာဗျူဟာအာရုံစိုက်တဲ့သူနည်းပညာသမားကပါဝင်ပတ်သက်.
created က x-rays အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လေ့လာဆနျးစ, ဗီဒီယိုကဖွစျသညျကိုတိပ်ခွေ, ဂရပ်ဖစ်ထွက်ရှာတွေ့မှသရုပ်ခွဲအကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်သောလျှင်သို့မဟုတ် PC သတင်းအချက်အလက် -developed.
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ခံစားနေရသူ၏လုံခြုံရေးအာမခံဖို့လည်းအစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှထိန်းညှိဖို့ကာကွယ်မှု devices များနှင့်အလင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံကိုအသုံးချရန်.
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခန္ဓာကိုယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်ရန်သံလိုက်သို့မဟုတ် radiologic ပုံရိပ်ထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကို run သို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ.
အရှည်နှင့်လွှမ်းခြုံကာလကိုဖန်တီးရန်အနေအထားပုံရိပ်ဂီယာနှင့် ALTER settings ကို, စာမေးပွဲတွင်၏ spec accordingto.
pc ဓာတ်ပုံကိုတိကျတဲ့ဂရပ်ဖစ်သို့ Key ကိုညွှန်ကြားချက်များနှင့်အသိပညာ, သို့မဟုတ်စကင်စီးရီး file နဲ့သိရှိနိုင်ဖို့, က transmitter နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိန်ညှိ.
Display ရဲ့အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ဧရိယာနှင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပျက်မှုသို့မဟုတ်ဆနျ့ကငျြဘ၏ရုပ်ရှင် display ကို Check.
client များစောင့်ကြည့်’ အခြေအနေများနှင့်သဘောထားတွေ, ဆရာဝန်မှအလွန်အကျွံဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြပယ်ဖျက်.
တင်သည်, အများဆုံးလိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုသတ်မှတ်ထားကြောင်းသေချာ.
စံချိန်, ချဉ်းကပ်နည်း, နှင့်ရောဂါပျောက်ကင်းဒေတာသို့မဟုတ်လူနာဖိုင်တွေထိန်းသိမ်းခြင်းဆက်လက်အစီရင်ခံစာများကိုပွငျဆငျ.
သိသိသာသာနေမကောင်းထပ်တိုးသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲအတွက်ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီနဲ့, ထိခိုက်, သို့မဟုတ်မသန်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းလူတွေ.
အသစ်သော tools တွေကိုဥပမာပေးပါ, နည်းစနစ်, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များအထူးပြုကြောင်းအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များနှင့်ပေး.
radiographed ခံရဖို့အဘို့ကို၏အတိမ်အနက်ကိုတွက်ချက်, အလားတူတိပ်ခွေတူရိယာတိုင်းတာခြင်းမှအသုံးချဖို့,.
အကျိုးစီးပွားဧရိယာမှသွေးကြောမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုရန်ဆရာဝန်နှင့်သင်ခန်းစာလိုင်းကူညီရန် function fluoroscope.
လူနာဖြစ်ကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန် radiologic န်ထမ်းမှတာဝန်ဆုံးဖြတ်ရန်.
အပိုဆောင်းဆေးဘက် downline နှင့်အတူပူးပေါင်း, သူနာပြုများသို့မဟုတ်ဆရာဝန်များအပါအဝင်, angiography သို့မဟုတ်ထူးခြားသောသွေးကြောနည်းလမ်းများလုပ်ဆောင်သွားရန်.
အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ဝတ္တရား Perform, လက်လီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဘတ်ဂျက်လေးလည်းအပါအဝင်, ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်း complementing ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ, သို့မဟုတ်စည်းရုံးရေးအလုပ်အစီအစဉ်များ.
radiographic ကိရိယာများပေါ်တွင်စီစဉ်ထားအသေးစားသို့မဟုတ် servicing အရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု Perform.
Active ကို-နားထောင်ခြင်း-ရန်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုကိုထောက်ပံ့သောအရာကိုအခြားသူများကိုပြောနေကြသည်, built ခံရသည့်အမှုအရာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ရှိခြင်း, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, နှင့်လက်မခံနိုင်သောအခြေအနေများမှာ mesmerizing ဘယ်တော့မှ.
Active ကို-သင်ယူ-နားလည်ခြင်းအချက်အလက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုချင်းစီကိုတည်ဆဲနှင့်အနာဂတ် problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသစ်အကြောင်း.
လတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများလေ့လာနေသို့မဟုတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာညာဘက်ပြဿနာများအတွက်နည်းပြ / သင်ကြားပို့ချမဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းလမ်းများသို့ချဉ်း ကပ်. -အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကောက်နေသင်ယူခြင်း.
ကော်ပိုရေးရှင်း၏စစ်ဆေးခြင်း-CheckingORAssessing ထိရောက်မှု, ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုအပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များစဉ်းစားရန်.
သူတို့မ သိ. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတုနျ့ပွနျအဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးအမြင်-သိ othersI တုံ့ပြန်မှု.
အခြားသူများစပ်လျဉ်း Dexter-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ ခြေလှမ်းများ.
တာဝန် execute ဖို့လိုအပျဂီယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ကြင်နာ.
တပ်ဆင်နေ-Installing Device များ, စက်, ဝါယာကြိုး, ယေဘုယျအားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ် applications များ.
အတော်ကြာအကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. coding-ရေးသားကွန်ပျူတာ packages များ.
function ခြေရာကောက်-မြင်လျှင် dial, ညွှန်ကိန်းများ, သို့မဟုတ်အခြားအရိပ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ပစ္စည်းလက်ရှိတွင်သင့်လျော်စွာလည်ပတ်နေသည်သေချာစေရန်.
နည်းလမ်းများသို့မဟုတ် tools များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်-ထိန်းချုပ်ခြင်းစစ်ဆင်ရေး.
troubleshooting-ဆုံးဖြတ်တဲ့ operating အမှားတွေအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်ဤအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုရှေးခယျြ.
လိုချင်သော tools တွေကိုအသုံးချဖို့ပြုပြင်တာတွေ-ကိုပြုပြင်တာတွေ devices များသို့မဟုတ်စက်တွေ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-conduction စစ်ဆေးမှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏စာမေးပွဲ, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှ.
ကြည့်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း-စဉ်းစားပါဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့အလားအလာဖြစ်ကြောင်းခြေလှမ်းများ ပတ်သက်. နှိုင်းယှဉ်စျေးနှုန်းများနှင့်ကြီးသောအမှုတို့ကိုအကြောင်းကို.
systems နည်းလမ်း၏မျိုးလုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်သောအရာကိုသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်လမ်းအပြောင်းအလဲများ, ပြဿနာများ, အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရလဒ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
ပိုက်ဆံခြော task ကိုဖျော်ဖြေဖို့မည်သို့အသုံးချမည်ကိုငွေ-ဆုံးဖြတ်၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤဥပဒေကြမ်းများများအတွက်ရောင်းချမှု.
ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-ရယူခြင်းနှင့် tool များ၏စံပြအသုံးချဘို့ကြုံနေရ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ထူထောင်မှု, နှင့်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့် function ကိုလုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
သူတို့အဖြစ်အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်-ညွှန်ပြပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်ဆင်ရေး, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, နှင့်လည်ပတ်ဖှယျ, အလုပ်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဖော်ထုတ်.
Connect ကိုရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် 2-တစ်နှစ်အဆင့်)
ဆုံးဖြတ်ချက် – 87.39%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 91.50%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 95.03%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 91.40%
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – 89.85%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 94.82%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 91.83%
adapter / လွတ်မြောက်ရေး – 92.19%
ပါဝင် – 95.47%
ရှုထောင့်များ၏အသိအမြင် – 93.66%
ရိုးသားခြင်း – 95.31%
လွတ်လပ်ခြင်း – 92.87%
တိုးတက်ခြင်း – 86.19%
နိုဝင်ဘာ 2, 2018 တွင် 9:25 နံနက်
နောက်ထပ်ရေးပါ, ငါပြောသမျှအားလုံးပါပဲ. စာသား, ပုံရသည်